Wonke umuntu uyaphupha of isivakashi ehlobo zingangabazi ukuthi wayenobuhlobo amasu ukuthi wenza wonke umsebenzi onzima isayithi. By the way, eminyakeni yamuva leliphupho uba ngokoqobo kakhulu lapho izimali ezithile. Minyaka yonke isidingo uhambo-ngemuva is kancane kancane, futhi intengo, kunalokho, incipha. Ngakho umlimi yokufuna ngezinhloso zezolimo - isikhathi eside akuyona okunethezeka kodwa ngempela. Okwamanje, izitolo nengadi imishini inikeza ezahlukene Amadivayisi ezifanayo ezivela abakhiqizi ezahlukene. Kukhona izinto ezivela China, eJalimane, e-Russia nokunye. D. Kodwa namuhla sifuna ukuba banake iyunithi Belarusian ngokuthi uhambo-ngemuva ugandaganda MTZ.
Le divayisi sazibonakalisa emakethe yasekhaya kanye nephasi loke. It ngenkuthalo nizuza eBelarus, e-Ukraine, eRussia, futhi ngisho ePoland. Futhi Kuyaphawuleka ukuthi le ikhophi wathi has a lot of ukushintshwa. Eminyakeni yamuva, ethandwa kakhulu ukuhamba-ngemuva ugandaganda MTZ 09. Njengoba isitshalo amandla lapha kukhona injini Japanese, "Honda» GX270 imodeli. Futhi ngemuva ugandaganda ifakwe manual transmission MT futhi ekhethekile steel pochvorezami. Kunezindlela ezihlukahlukene metal iziqobosho for ukufakwa imishini ezengeziwe nezinamathiselo, okwenza ithuluzi lokubika enemisebenzi ngaphezulu isicelo. Nale divayisi, nakanjani ukholwa ukuthi ukuhamba-ngemuva ugandaganda MTZ hhayi zimelela zonyaka ezimbalwa ngeze. Kungani ayeqiniseka kangaka? Kuyinto pretty elula. Iqiniso lokuthi umkhiqizi Belarusian sobubanzi izesekeli kule divayisi. Ngokwesibonelo, ehlobo ingasetshenziswa njengendlela ungumlimi, futhi ebusika - njengendlela snowthrower egcwele. Nge-rotary i-walk ngemuva ugandaganda MTZ 05 amadivaysi kahle futhi ngokushesha ukuhlanza indawo kusukela emigodini iqhwa. Futhi okubaluleke - emsebenzini wena sizame ubuncane. Ukuze bambe up engadini noma egcekeni ahlanzekile kweqhwa, wena nje kufanele abe uhambo-ngemuva upetrol kanye ne amqondise endleleni okuyiyona. Ngaphezu kwalokho, lo mshini kungenziwa bufakwe-trailer, bese ungakwazi ukuyisebenzisa njengoba weloli elithile elincane ukuthutha noma iyiphi wezimpahla - umquba, ukhuni, isihlabathi, izinto zokwakha kanye nezinye izinto eziningi.
MTZ ukuhamba-ngemuva ugandaganda ifakwe ezinamandla ezine-unhlangothi likaphethiloli injini. Isivinini salo obuyisilinganiselo 17 ngehora. Umqulu zokusebenza umshini - 270 cubic amasentimitha umthamo - 9 amahhashi. Kepha-gearbox "Belarusian" usuphothuliwe nge ukudluliswa lemanyuwali esigabeni 4. Clearance idivayisi kuyinto 30 amasentimitha, evumela ukuthi ukuthutha ezindaweni embossed ngaphandle ilele. Umthombo powerplant ifinyelela amahora 1000.
Okwamanje, izindleko isilinganiso uhamba ugandaganda ekhiqizwa Belarus kuyinto ruble ecishe ibe yizinkulungwane 65-66. Sikhishwe nokwenza kwayo, ukuthembeka nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa, kungashiwo ukuthi i-walk ngemuva ugandaganda MTZ ingenye amadivayisi embalwa isilinganiso best of intengo nekhwalithi.